Sida loo shaqo tago Amazon | Sameynta iyo daraasadaha
Maria Jose Roldan | 11/06/2021 12:00 | Ka Bixitaanka Shaqada
Amazon shaki la’aan waa mid kamid ah shirkadaha ugu muhiimsan adduunka. Iyada oo loo marayo boggeeda malaayiin qof ayaa sameeya wax iibsasho nooc kasta ah maalin kasta, iyaga oo u abuuraya faa'iido aan la barbardhigi karin shirkadda la yiri. Waxaas oo dhami suurto gal ma noqon doonaan haddii aan la helin shaqaale weyn oo ay shirkaddan weyn leedahay.
Xarunta ugu weyn waxay ku taal gobolka Seattle maantana qofka aan nooc ka mid ah wax iibsi ka dhex samayn Amazon waa dhif iyo naadir. Dad badani waxay u maleynayaan inay adag tahay suurtogalnimada ka mid noqoshada shaqaalaha weyn ee ka kooban shirkadda noocaas ah, Si kastaba ha noqotee, Amazon waxay si joogto ah u socotaa oo waxay ku daraysaa shaqaale cusub shaqaalaheeda.
Maqaalka soo socda waxaan kuu sheegi doonaa sida aad uga mid noqon karto Amazon iyo shuruudaha looga baahan yahay.
1 Maxay ka dhigan tahay ka shaqeynta Amazon
2 Sidee loo tagaa shaqada Amazon?
Maxay ka dhigan tahay ka shaqeynta Amazon
Marka ay timaado falanqaynta shaqooyinka kala duwan ee laga bixiyo Amazon, waa in la ogaadaa inay jiraan kuwo badan oo lagu daro xaqiiqda ah inay aad u kala duwan yihiin. Tani waa sababta oo ah shabakadda saadka ayaa aad u ballaaran, helitaanka xarun ku baahsan dhammaan dhulka Isbaanishka.
Marka laga hadlayo mushaharka shaqaalaha, waa in la sheegaa inay ka mid tahay kuwa ugu sarreeya waaxda. Marka laga reebo mushaharka aasaasiga ah, shaqaaluhu badanaa waxay helaan gunno dheeri ah oo la mid noqon karta qorshaha hawlgabka. Taas ka sokow, shirkaddu waxay qaaddaa dhammaan kharashyada haddii ay shaqaaluhu rabaan inay tababaraan wax badan oo dheeraad ah si loogu horumariyo shaqaalaha dhexdiisa.
Waxyaabaha wanaagsan ee wanaagsan ee ku saabsan ka mid noqoshada shirkadan ayaa ah xaqiiqda ah in ganacsiga elektaroonigga ah uu si isdaba joog ah kor ugu kacayo oo maalinba maalinta ka dambaysa u sii kordhayo. Sidaa darteed, Amazon waa shirkad caqli gal ah in muddo ah iyo sannado badan. Sidaa darteed, ka shaqeynta shirkaddan waa inay sugto shaqo muddada dhexe iyo muddada dheer, wax aad muhiim u ah sanadaha aan socono.
Sidee loo tagaa shaqada Amazon?
Haddii aad xiiseyneyso ka mid noqoshada shirkadan weyn, waa inaad gashaa boggeeda rasmiga ah. Halkaas waxaad ka heli kartaa shaqo abuuris iyo shaqooyin cusub oo banaan oo nooc walba leh. Waxa caadiga ah ayaa ah in shirkadaha dibedda ay mas'uul ka yihiin sameynta xulashada shaqaalaha cusub ee geli doona shaqaalaha Amazon. Marka laga hadlayo shuruudaha la dalbaday waa kuwan soo socda:
Oggolaanshaha shaqada oo ansax ah iyo aad ku nooshahay wadanka boosaska la siiyay.
Amarka luuqada laga hadlayo waxayna kuxirantahay goobta shaqadu ka socoto.
Shaqooyinka qaarkood waxay u baahan yihiin laysanka darawalnimada oo ay weheliso lahaanshaha gaari.
Eda'da ugu yar ee 18 sano.
Rabitaanka barashada iyo dabeecad wanaagsan.
Awood u lahaanshaha ka shaqeynta meelaha sare, qaasatan haddii shaqo bixinta loo tixraacayo dhinaca saadka. Xaaladahan oo kale waxaa sidoo kale loo baahan yahay in qofku awoodo inuu xamulo culeys ka badan 10 kiilo oo aan dhibaato lahayn.
Waxaa sidoo kale badanaa loo baahan yahay mid ka mid ah shuruudaha, in qofku uusan wax dhib ah qabin markay tahay inuu shaqeyn karo habeenkii.
Marka laga hadlayo mushaharka ama waxa shaqaale ka tirsan shirkadda Amazon ay soo oogaan, waa in la muujiyaa in mushaharku kala duwanaan doono iyadoo ku xiran shaqada uu qofku qabo. Marka laga hadlayo ragga dhalmada, waxaa lagu qiyaasaa inay ka qaadaan qiyaastii 1.200 euro bishii. Xaaladda ka shaqeynta saadka ama bakhaarka, mushaharku wuxuu gaarayaa 1.600 euro bishii. Sidan oo kale, mushaarka sanadlaha ah ee qofka alaab-qeybiyeha Amazon keena waa 10.000 oo euro sanadkii iyo hadday tahay shaqaalaha bakhaarka, mushaharku wuxuu gaarayaa 20.000 euro sanadkii.
Marka la soo koobo, Amazon waa shirkad isdaba-joog ah oo sii kordheysa oo abuuraysa shaqooyin badan sanadka oo dhan. Waxay u socotaa iyada oo aan dhihi waxaan wajaheynaa mid ka mid ah shirkadaha ugu muhiimsan adduunka. Sidaad aragtay, shuruudaha looga baahan yahay gelitaanka xoogga shaqaalaha ayaan ahayn kuwo aad u baahan. Haddii aad xiiseyneyso, waa inaad tagtaa websaydhka Amazon oo aad raadisaa shaqooyinka kala duwan ee la soo bandhigo. Halkaas, qofku wuxuu ka raadin karaa goobta shaqada ama jagada uu bixiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Daraasado » Ka Bixitaanka Shaqada » Sida loo shaqo tago Amazon
Sida loo noqdo wakiilka guryaha: 5 talooyin waxtar leh